Ukuhlala ngeholide emaphandleni, kumasipala waseVimmerby
Unyaka wonke uhlala ezilalini kunye nehlathi elisecaleni. 500 m ukuya kummelwane okufutshane kunye nomninimzi. Ukuba kufutshane nechibi, ukuqubha kunye nokuloba. Ithuba lokuboleka isikhephe liyafumaneka. Imizuzu engama-30 uqhubela eVimmerby, phakathi kwabanye, ilizwe lika-Astrid Lindgren kunye neBullerbyn. Imizuzu engama-35 ukuya kwidolophu yamaplanga e-Eksjö, malunga ne-12-15 min ukuya eMariannelund. (igrosari ekufutshane) Emil Katthult 8 min. Phakathi kwezinye izinto, iipaki ezimbini zelizwe, (Kvill kunye neSkurugata), ezikufutshane neendlela zokuhamba ezintle. Iimarike zentakumba. Indalo ethandekayo ngaphandle kwendlu kuhambo lwasehlathini okanye ukuqubha kunye nokuloba.
Ukuzola, ukuzola kunye nendalo ejikeleze indawo yokuhlala ibonelela ngokuphumla okuphezulu! Pheka ngaphakathi okanye upheke ngaphandle. Zonke izitya ziyafumaneka ukupheka nokubhaka. Amagumbi amabini okulala anebhedi ephindwe kabini, enye nayo ineebhedi ezimbini zomntu omnye, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini zomntu omnye. Kukho imiqamelo, iingubo, iingubo kunye neetawuli zasekhitshini. (Amashiti, iitawuli zokuhlambela oza nazo) Isepha, ijeli yeshawa, ishampu, iphepha langasese, iitawuli zasekhitshini ziyafumaneka xa ufika kunye nekofu neti.
Indalo entle yeSmåland enehlathi, amadlelo, iingcingo zamatye namachibi. Ukuba kufutshane nezinto ezininzi ezinomtsalane, kubandakanya nelizwe le-Astrid Lindgren, iKatthult, iBullerbyn, idolophu yamaplanga i-Eksjö kunye nomgama omfutshane ukuya e-Västervik (idolophu yasehlotyeni) Iindlela zokuhamba intaba, iindlela zebhayisekile zikufuphi. Iipaki zesizwe ezintle ezikufuphi.
Kuya kuhlala kukho umntu okhoyo ngexesha lokuhlala kwakho endlwini ukuba kuyimfuneko. Uqhagamshelwano nomninimzi / umamkeli ngefowuni ephathwayo / i-imeyile imini yonke. Ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba umamkeli / usapho ludibana kwaye luxhonywe kunye neendwendwe ngezihlandlo ezahlukeneyo. Amava, iingcebiso kunye neengcebiso zibhidekile kwaye ubuhlobo buvela.
Kuya kuhlala kukho umntu okhoyo ngexesha lokuhlala kwakho endlwini ukuba kuyimfuneko. Uqhagamshelwano nomninimzi / umamkeli ngefowuni ephathwayo / i-imeyile imini yonke. Ngamanye a…